पर्याप्त नसुत्दा कलेज तहका विद्यार्थीहरुमा मानसिक समस्याको खतरा ! - नेपालबहस
पर्याप्त नसुत्दा कलेज तहका विद्यार्थीहरुमा मानसिक समस्याको खतरा !
एजेन्सी । निद्रा पुग्नेगरी पर्याप्त नसुत्ने कलेज तहका विद्यार्थीहरुको मानसिक विकासमा समस्या हुने खतरा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनको निश्कर्षमा हरेक रात पर्याप्त सुत्न सवैलाई सुझाव दिइएको छ ।
Previous articleकैलालीको घोडाघोडीमा चराको सङ्ख्या वृद्धि, यसवर्ष २९९ प्रजातिका चरा फेला !
Next articleकम्पनीको लापरवाहीले चालीस वर्षसम्म सिँचाइ योजना अलपत्र !
जापानमा वर्षासँगै बाढी, पहिरो र डुवान, २० जनाको मृत्यु